"1 Dia namaly Bildada Sohita ka nanao hoe: 2 Mandra-pahoviana no hamandrika teny hianareo? Mba hendre aloha, dia vao hiteny izahay. 3 Sao ataonareo ho biby anie izahay ka tahaka ny maloto eo imasonareo? 4 Ry ilay mamiravira tena amin’ny fahatezerana, noho ny aminao va no hahatonga ny tany ho lao, ary ny vatolampy hafindra hiala amin’ny fitoerany? 5 Tsy izany, fa ho faty ny jiron’ny ratsy fanahy, ary hilopilopy ny lelafony; 6 Ny mazava manjary maizina ao amin’ny lainy, ary ny jirony eo amboniny dia maty. 7 Etena ny herin’ny diany, ary ny fisainany ihany no mandavo azy. 8 Fa ny tongony ihany no mahatonga azy eo amin’ny fandrika harato, ka manitsaka eo amin’ny harato izy; 9 Azon’ny fandrika ny ombelahin-tongony Ary voahazon’ny tadivavarana; 10 Miafina ao amin’ny tany ny fandrika haningotra azy Sy ny tonta eny an-dàlana. 11 Fampitahorana no mampitahotra azy manodidina ka mampivadi-po azy eny amin’ny alehany rehetra. 12 Liana azy ny loza, ary ny fandringanana dia vonona eo anilany; 13 Eny, laniny tsikelikely ny hodiny; ny momba ny tenany dia lanin’ny lahimatoan’ny fahafatesana. 14 Ongotana hiala amin’ny lainy ny zavatra itokiany, ka tsy maintsy ho entina ho amin’ilay mpanjaka mampahatahotra indrindra izy. 15 Izay tsy taranany no hitoetra ao amin’ny lainy; Solifara no hafafy amin’ny fonenany. 16 Maina ny fakany ao ambany, ary tapaka ny rantsany eo ambony. 17 Ny fahatsiarovana azy dia very tsy ho eo amin’ny tany. Ary tsy malaza eny ivelany izy. 18 Roahina hiala amin’ny mazava ho any amin’ny maizina izy ary enjehina hiala amin’izao tontolo izao. 19 Tsy manana fara mandimby eo amin’ny fireneny izy, ka tsy misy tsy tratry ny loza ny ao amin’ny fonenany. 20 Ny manjo azy dia italanjonan’ny any andrefana, ary ny any atsinanana raiki-tahotra. 21 Izany tokoa no anjaran’ny ratsy fanahy, ary izany no manjo ny tsy mahalala an’Andriamanitra." Joba 18:1-21
Nivadika ho fifamaliana ny fifamangiana teo amin’i Joba sy ireto sakaizany. Anaovan’izy ireo adim-borontsiloza i Joba. Niresaka ny any ambadiky ny fahafatesana i Joba teo aloha fa i Bildada kosa miresaka ny zava-mitranga amin’ireo ratsy fanahy ety an-tany. Tsy miteny mivantana akory izy ireo hoe i Joba no tiany ho lazaina saingy azo an-tsaina ihany hoe sokajiany ho ao anatin’izay resahiny i Joba.
Deoteronomia 28, tapany faharoa. Mampahatsiahy an’io teny nambaran’Andriamanitra io ny teny ataon’i Bildada. Rehefa tsy mihaino tsara ny feon’i Jehovah Andriamanitra ny olona dia izao tokoa no mahazo azy. Ny tsy ampy amin’izay ambarany dia ny hoe: mety ho tratran’ny loza ihany koa ny olona mankatoa ny Tenin’Andriamanitra. Noho izany tsy ampy hamaritana ny maha-tsara fanahy na ratsy fanahy ny olona iray mihitsy ny olana mahazo azy eo amin’ny fiainany na koa ny fahombiazany ara-materialy eo amin’ny fiainany. Tsy hoe rehefa manana dia notahian’Andriamanitra sy ankasitrahany ary rehefa mahantra sy sahirana dia nilaozany sy faiziny.
Antony hivavahana? Ka inona izany no antony hivavahana hoy ny sasany hanontany. Ny fahoriana sy olana eo amin’ny fiainan’ny mino dia mandalo ihany ary ampiasain’Andriamanitra ho soa ireny araka ny Rômanina 8:28. Mahatonga antsika handinika tsara koa izao ny amin’ny zavatra ambarantsika rehefa mitory ny Filazantsara isika. Sao dia fampanantenana fiadanana eto an-tany sy fampitahorana ny amin’ny loza miandry eto an-tany sy any an-danitra fotsiny ihany no ambarantsika fa tsy ny fitiavan’Andriamanitra?